अब बस चढेर दिल्लीबाट लन्डन : ७० दिनमा पुगिने, कति लाग्छ भाडा? - Himali Patrika	अब बस चढेर दिल्लीबाट लन्डन : ७० दिनमा पुगिने, कति लाग्छ भाडा? - Himali Patrika
अब बस चढेर दिल्लीबाट लन्डन : ७० दिनमा पुगिने, कति लाग्छ भाडा?
सन् १९५० देखि १९७० दशकमा कलकत्तादेखि लन्डनमा बस चल्थ्यो। यो यात्रा ४५ दिनको थियो। तर बस दुर्घटनामा परेपछि उक्त सेवा बन्द गरियो। एड्भेन्चर ओभरल्यान्डले सञ्चालन गरेको संसारको सबैभन्दा लामो यो बस यात्रा सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि सुरू हुने बताइएको छ। दिल्लीबाट लन्डनसम्म चल्ने बसमा जम्मा २० जना यात्रु राखिनेछ। उनीहरूलाई यात्राक्रम विभिन्न देशका प्रख्यात ठाउँहरूमा घुमाइनेछ।
यात्राका लागि तयार पारिएको यो बसमा वाई-फाई, बिजनेस क्लास सिटहरू, युएसबी पोर्ट, विद्युतीय प्लगहरूलगायत विशेषताहरू समावेश गरिएको छ। यसमा यात्रुको गोपनीयताका लागि सिटहरू बीच विभाजनहरू समेत गरिएको छ। त्यस्तै, बसमा पेय पदार्थ र खाजाका लागि कुलरसहितको मिनी प्यान्ट्री पनि पाउन सकिन्छ।
यात्रालाई आवश्यक सामग्री राखेर प्रत्येक यात्रुले दुई वटासम्म ठूलो सुटकेस लग्न सक्नेछन्। सामग्री सुरक्षाको लागि बसमा निजी लकर पनि दिइनेछ। प्रत्येक व्यक्तिले यो बस यात्राको लागि भारू १५ लाख अर्थात् नेपाली करिब २४ लाख रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैमा गाडीको टिकट, भिसा, बस्ने-खानेको सुविधालगायत सेवाहरू समावेश गरिएको छ। सेतोपाटीबाट